အနုပညာလောကထဲကနေ ထွက်ခွာချင်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တဲ့ အန်တီ သန်းသန်းစိုး – Suehninsi
အနုပညာလောကထဲကနေ ထွက်ခွာချင်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တဲ့ အန်တီ သန်းသန်းစိုး
Sue | September 13, 2020 | ရသစုံ | No Comments
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှစတင်ပြီး အန်တီဒေါ်သန်းသန်းစိုးကတော့ ရုပ်ရှင်လောကသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကာသရုပ်ဆောင် ကာရိုက်တာပေါင်းစုံကနေ ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပါ။အခုအချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဒေါ်သန်းသန်းစိုးဟာ အနုပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး မျိုးဆက်သစ်အနုပညာရှင်လေးတွေကို
မွေးထုတ်ပေးလျှက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်း မီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ ဒေါ်သန်းသန်းစိုးက သူမအနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကနေထွက်ခွာသွားချင်နေပြီလို့ ပြောလာခဲ့တာပါ။ဒီလိုထွက်ခွာသွားချင်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုလည်း အန်တီဒေါ်သန်းသန်းစိုးက
အခုလိုဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “အသက် (၁၅) နှစ် အရွယ် ကတည်းက အနုပညာလောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတော့ ဒီလောကရဲ့ အကောင်း၊ အဆိုးဒဏ်တွေကို တော်တော်ခံခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီလောက က ဟန်ဆောင်မှု များတယ်၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ များတယ်။ ဟန်မဆောင်ချင်ဘူး .. ဟန်ဆောင်ရတာကို မောလို့ အနုပညာလောက က ထွက်သွားချင်ပြီ” လို့
ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ဒါဆိုဘာလို့ဆက်ရိုက်နေတာလဲလို့ပြောရရင် အန်တီ့မှာ အခုလက်ရှိ အနုပညာသင်တန်းကျောင်းရှိတယ် ဒီကလေးတွေအတွက်ကို အန်တီသင်ကြားပြသပေးဖို့ကစာတွေ့တစ်ခုတည်းတင်မရဘူး။လက်တွေ့ပါ သင်ကြားပေးရမယ်ပေါ့နော် ဒီလိုလက်တွေ့ပြတဲ့နေရာမှာ
အန်တီက Shooting တွေမှာရှိနေမှဖြစ်မယ်…. အဲ့ဒီအတွက်ရိုက်နေသေးတာပါ အသက် ၅၀ ကျော်လာကတည်းက အန်တီ အနုပညာလောကကနေထွက်သွားချင်ခဲ့တာ အန်တီ ဘုရားတရားတွေပိုလုပ်ချင်တယ်.. အဲ့ဒါတွေပို အချိန်ပေးချင်တယ် ” လို့ အန်တီဒေါ်သန်းသန်းစိုးက
ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….ဒေါ်သန်းသန်းစိုးကတော့ ဟန်ဆောင်မှုတွေများတဲ့ အနုပညာလောကထဲနေထွက်သွားချင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒေါ်သန်းသန်းစိုးအပေါ် အမြင်လေးကိုလည်း မျှဝေခဲ့ကြပါအုန်းနော်။
အသကျ ၁၅ နှဈအရှယျမှစတငျပွီး အနျတီဒျေါသနျးသနျးစိုးကတော့ ရုပျရှငျလောကသို့ဝငျရောကျလာခဲ့ကာသရုပျဆောငျ ကာရိုကျတာပေါငျးစုံကနေ ဝငျရောကျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတဈဦးပါ။အခုအခြိနျထိ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ ဒျေါသနျးသနျးစိုးဟာ အနုပညာသငျတနျးကြောငျးတဈခုကိုလညျးဖှငျ့လှဈထားပွီး မြိုးဆကျသဈအနုပညာရှငျလေးတှကေို
မှေးထုတျပေးလြှကျရှိတာဖွဈပါတယျ။ ယခုရကျပိုငျး မီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာတော့ ဒျေါသနျးသနျးစိုးက သူမအနနေဲ့ အနုပညာလောကထဲကနထှေကျခှာသှားခငျြနပွေီလို့ ပွောလာခဲ့တာပါ။ဒီလိုထှကျခှာသှားခငျြရတဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးကိုလညျး အနျတီဒျေါသနျးသနျးစိုးက
အခုလိုဖှငျ့ဟလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ “အသကျ (၁၅) နှဈ အရှယျ ကတညျးက အနုပညာလောကမှာ ကငျြလညျခဲ့ဖူးတော့ ဒီလောကရဲ့ အကောငျး၊ အဆိုးဒဏျတှကေို တျောတျောခံခဲ့ပွီးပါပွီ။ ဒီလောက က ဟနျဆောငျမှု မြားတယျ၊ ခှဲခွားဆကျဆံမှုတှေ မြားတယျ။ ဟနျမဆောငျခငျြဘူး .. ဟနျဆောငျရတာကို မောလို့ အနုပညာလောက က ထှကျသှားခငျြပွီ” လို့
ပွောလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ “ဒါဆိုဘာလို့ဆကျရိုကျနတောလဲလို့ပွောရရငျ အနျတီ့မှာ အခုလကျရှိ အနုပညာသငျတနျးကြောငျးရှိတယျ ဒီကလေးတှအေတှကျကို အနျတီသငျကွားပွသပေးဖို့ကစာတှတေ့ဈခုတညျးတငျမရဘူး။လကျတှပေ့ါ သငျကွားပေးရမယျပေါ့နျော ဒီလိုလကျတှပွေ့တဲ့နရောမှာ
အနျတီက Shooting တှမှောရှိနမှေဖွဈမယျ…. အဲ့ဒီအတှကျရိုကျနသေေးတာပါ အသကျ ၅၀ ကြျောလာကတညျးက အနျတီ အနုပညာလောကကနထှေကျသှားခငျြခဲ့တာ အနျတီ ဘုရားတရားတှပေိုလုပျခငျြတယျ.. အဲ့ဒါတှပေို အခြိနျပေးခငျြတယျ ” လို့ အနျတီဒျေါသနျးသနျးစိုးက
ပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….ဒျေါသနျးသနျးစိုးကတော့ ဟနျဆောငျမှုတှမြေားတဲ့ အနုပညာလောကထဲနထှေကျသှားခငျြပွီဖွဈတဲ့အကွောငျး ပွောပွခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။ပရိသတျကွီးလညျး ဒျေါသနျးသနျးစိုးအပျေါ အမွငျလေးကိုလညျး မြှဝခေဲ့ကွပါအုနျးနျော။
Source : SY Myanamr
သမီးလေး Portia ကို ချစ်သူရွေးမှားမှာ ခြူစားတဲ့သူတွေနဲ့ တိုးမှာ ကြောက်တယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်